काठमाण्डौलाई स्मार्ट शहर बनाउने कुनै आइडिया छ ? जित्न सक्नुहुन्छ रु. ५ लाख पुरस्कार Bizshala -
काठमाण्डौलाई स्मार्ट शहर बनाउने कुनै आइडिया छ ? जित्न सक्नुहुन्छ रु. ५ लाख पुरस्कार
काठमाडौँ । ‘स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा’का लागि पहिलो चरणमा १४२ सुझाव छनोटमा परेका छन् । सुझाव राख्नका लागि एक महीनाको समय निर्धारण गरिएकामा ४५२ सुझाव सङ्कलन भएका थिए । तीमध्येबाट छनोट गरी १४२ परेका हुन् ।
काठमाडौँको विद्यमान शहरी समस्यालाई प्रविधिमा आधारित नयाँ सोचबाट समाधान खोज्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरले गत मङ्सिर २६ गतेबाट सुझाव सङ्कलन गर्न शुरु गरेको थियो । मुख्यगरी समुदाय तथा वातावरण, शहरी पूर्वाधार विकास, सामुदायिक सेवा र सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन गरी चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका मुख्य विषय बनाइएको थियो ।
विभिन्न चरण गरी आगामी छ महीनासम्म चल्ने यस प्रतिस्पर्धामा गत पुस ३० गतेसम्म पहिलो चरणको सोच दर्ता गर्ने समय दिइएको कामपाको शहरी योजना आयोगका सदस्य–सचिव सरोज बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिस्पर्धाबाट आएका सोचबाट काठमाडौँका शहरी समस्या पहिचान हुने र ती समस्याको समाधानमा प्रविधिमैत्री उपाय पत्ता लाग्ने कामपाले जनाएको छ । प्रविधि, ज्ञान र सीपका माध्यमबाट महानगरको समग्र क्षेत्रको परिवर्तनका लागि प्रविधिमैत्री आधार तयार हुनेछ ।
उत्कृष्ट सोचको आधारमा विजेतालाई रु पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यो पुरस्कारबाट उत्कृष्ट मानिएको सोचलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने महानगरको लक्ष्य हो । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका चार विषयगत विजेतालाई प्रतिसमूह रु दुई लाख र उपविजेतालाई जनही रु एक लाख प्रदान गरिनेछ ।
सदस्य–सचिव बस्नेतका अनुसार काठमाडौँको समस्या पहिचान गरी निराकरण, नवीन र प्रविधिमैत्री उपायको खोजी गर्न कामपाले ‘स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा, २०७५’ शुरु गरेको हो ।